Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Anguilla: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fampandrosoana ara-tsosialy Anguilla dia nampita ny vaovao farany sy vaovao tsara tamin'ny fanavaozana farany ny valintenin'ny nosy momba an'i Covid-19 areti-mandringana manerantany, navoaka ny alahady 26 aprily 2020.
“Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy tranga ahiahiana ary tsy misy porofo momba ny fifindran'ny virus COVID-19 ao Anguilla. Ankoatr'izay, ireo tranga telo voamarina dia efa sitrana ankehitriny ary efa mihoatra ny 28 andro taorian'ny tranga voamarina farany.
Tsy isalasalana fa zava-dehibe io ary zava-bita lehibe ho an'i Anguilla. Na izany aza, mba hitazomana io satanasa io dia tsy maintsy mijanona tsy miova amin'ny ezaka ataontsika isika mba hisorohana an'io virus io tsy hametraka toerana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ny Ministeran'ny Fahasalamana dia manentana ny mponina hanohy hanaraka ny fomba fidiovana, ny fitsipiky ny taovam-pisefoana ary ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina.
Ankoatr'izay, raha toa ka manjaka ny toe-javatra epidemiolojika ankehitriny, ny mpikamban'ny besinimaro dia mety manantena ny fampihenan'ny fameperana ankehitriny ny hetsika sy ny fivorian'ny besinimaro amin'ny fomba dingana mandritra ny herinandro ho avy. Ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny governemanta Anguilla dia manamafy fa ny fahasalamana sy ny filaminan'ny firenena no laharam-pahamehana indrindra.
Hanohy hanome vaovao ara-potoana sy marina ny Minisitra raha mbola mivoatra hatrany ny raharaha. Ireo olona manana fanontaniana na ahiahy dia tokony hiantso ny laharam-pifandraisan'ny Ministera amin'ny 476-7627, izany dia SOAP 476 na 584-4263, izany hoe 584-HAND. Ny Ministeran'ny Fahasalamana dia hanohy hanome fanavaozana ara-potoana amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny haino aman-jery, ny pejy Facebook ofisialinay na amin'ny www.iternancf19.ai. "
Dominica: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
“Jereo” Malta izao… Mijanona ao an-trano ary mijere horonantsary notsongaina tany Malta